Qindomina Ya'i Brusel aka gargaruf
Koree qindesitu Ya’I Oromo
Hawasoota Belgiulm, Netherlands, London, Norway,
Sweden,Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, München, Switzerland
Kabajamtoota Oromo Awuropaa,
Yaroo ama dhignii Oromo, enyumasatiif jeecha, lola’a jiru, Motumaan abbaa irree, Tgree, qabenyii Oromo itii mi’awuraa kanka’e, mirga sabakeenyaa akamalee sarba, ukaamsaa ena jiiru, hundikeenyaa gaddaafii mana mana keenyati gubacha aka jiirruu kan beekameedha.
Kanumara kanka’e, nuti ilman Oromo biya gara garaa jiirruu otoo waal eegnu yaroon aka hindabarree, kara dandenyeen waan ta’a jiru dura dhabachuuf waaliin hasoofnee murtee tokora genyee sosocho’a jirraa. Ijoon dubbii harkati qabanees aka kana gadiiti:
Ilalcha: Diina keenya kan akanati ifaan nufixa jiru kan mo’anu, akuuma ijooleen biya agarsiisa jiran, hundi keenya harka yoo waalqabanedhaa. Kana goonaan yaroonilee xinoo achii hasiqu malee dinii nuti mo’achu hiindandeenyee hinjiratu – hiyumalee dabalatee. Kanaafuu otoo waaliti danqa hinta’in nuti warrii ala jiruus akuma dandeetikenyaa tatafachutu nura jira. Oromoon hundi kara waalitii dhufee waaliin hasa’wu hundi banamee tokumaansaa cimuratii hundi kenya halkaniif guya hojechuun dirqama kenya ta’a.
Kayoo: Koreen kana qindeesa jiiru waan sadiif ta’usa siniif ibsina:
· Qophiinaa bayeesaan Oromooni Awuropa jiran kan bal’inan itii hirmatan hiriira guuddaa Brusseliti ademsisuu
· Hirira boddee galgala adaa, kan artistooni jajaboon iti hirmatan qopheesu,
· Itii anee, marii kan qooda iti fudhataan hunda sagalee sanii dhageesisu danda’an gegeesu ta’a.
Kana idoon gawudhaaf hirmanaan hawasoota idoo olana qaba. Kanaafuu misensoota hundaa aka iraati hirmatan lafa jala aka sochooftaan kabajaaf obbooluuma Oromotiin isiin affeera.
Ø Iddoo qophiin iti godhamu: Brussel
Ø Yaroon iti goodhamu: Noanoo May 20, 2016
Sa’a iti goodhamuuf gafasa, teesoo waajiin isiin beksisna. Sana duraas waan babrbachiisu ta’erati isin qunamna. Sinilee yada nukeenufii waan dandeesaniratii lafa jala qooda irati fudhachuun kan lamuma ta’a. Ibsa dabalata yoyiin gaafilee nuf erga, batalati siniif debisna.
“Oromon iddoosa qabachutu ira jira, hinqabataas”
Koree qindesiitu Ya’i Oromo – KYO
Dhumarati waan xinoo kana gaddi isiin affeerra :
Ijoolee Oromo kan Awuropa maraa,
Ka’a tatafadha harmee Oromia dafneetu agarraa,
Walii ha birmanu hindheensiinu waaliraa,
Kunii ta’u banana nutii ta’a farraa,
Hakaafnu kankufee harka waal qabanee,
Yadeefanu mirgaa handhuuraas Finfinee,
Qeeroon qareen kenya nu falmachaa jiiru,
Jarsa jarti hinjenee da’imnii otoo hinafiin kan qabdu guduru,
Jagnuma Oromo maal jedhee dubadhuu akaamiin sararu.
03/17/16 04:33:00 am,
Oromo toko nuuf hagodhu! Kan waliin loleef waliti dalane, ha waliin araramu!!!
10/07/15 12:17:00 pm, 1 comment »